Wafdiga Soomaaliya uga qeyb galeysa Ciyaaraha Rio oo dalka ka ambabaxay+Sawirro
Last update: Sunday, May 13 2018 - 11:21:28
Tuesday August 02, 2016 - 17:26:42 in Wararka Gudaha by Nocsom Editor
Waxaa maanta garoonka Aaden Cadde ka ambabaxay Wafdiga ciyaartoyda Soomaaliya uga qeyb galeysa ciyaaraha Olombikada aduunka Rio 2016 ee ka dhici doona dalka Brazil.
Ciyaartoyda uu todobaadkan usoo gebagaboobay tababarki ay tartanka ugu diyaargaroobayeen ayaa waxaa maalinadii shalay calaka dalka ku wareejiyay madaxweynaha dalka waxaana xaflad saagootin ah usameeyay ciyaartoyda ciyaaraha Fudud.
Macalinka Xulka qaranka Maxamuud Caddow Nuur oo la hadlay nocsom.com ayaa sheegay in ay diyaar garow adag u galeen ciyaarahan isla markaana ay rajeynayaan in ay natiijoay umadda Soomaaliyeed ku faraxdo keeni doonaan.
Macalinka ayaa dhanka kale u mahad celiyay Guddiga Olombika Soomaaliyeed oo uu xusay in ay taageero dhameystiran la garabtyaagnaayeen inta ay ku jireendiyaargarowga .
Wafdiga maanta ka ambabaxay dalka ayaa ka kooban Maxamed Daa'uud Maxamed iyo Maryan Nuux Muuse oo ah labada Oradyahan ee tartanka ka qeyb galaya Macalin Maxamuud Caddow oo ah Macalinka Xulka qaranka iyo Guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha Fudud Khadiijo Aadan Daahir, waxaana dalka Brazil Xoghayaha Gos Duran Axmed Faarax iyo Faadumo Cali Nuur oo ah madaxa Gos eetartanka Rio.
Maxamed Daa'uud aya u tartami doona orodka 5,000 halka MaryanNuux Muuse ay ay ka qeyb qadan doonto orodka 400 mtr.